Dagaal culus oo goor dhaw ka qarxay deegaanka Jannaale |
Dagaal culus oo goor dhaw ka qarxay deegaanka Jannaale
Muqdisho–Deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellada Hoose waxaa goor dhaw ka qarxay dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada dowladda Soomaaliya iyo dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Dad ku nool deegaanka uu dagaalku ka socdo ee Jannaale ayaa sheegay iin ay soo weerareen ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM, isla markaana dagaal culus ay kala hor tageen dagaalamayaasha Al-Shabaab, hatana ciidamada is garabsanaya ay Shabaab kala wareegeen qeybo badan oo ka tirsan magaalada.
Tan iyo shalay ayaa waxaa la sheegay in ciidamada dowladda Sommaliya iyo kuwa AMISOM ay madaafiic ku garaacayeen deegaanka Jannaale, iyadoo halkaas laga soo weriyey dhimashada ku dhawaad 10 ruux oo shacab ah iyo dhaawacyo intaasi ka badan oo dadkii magaaladaas ku noolaa kasoo gaartay madaafiicda lagu garaacay.
Saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa noo sheegay in ay la wareegeen gacan ku heynta deegaanka Jannaale, isla markaana ay hadda gudaha magaalada ka baarayaan haraadiga Al-Shabaab iyo hadii ay jiraan qaraxyo lagu aasay
Sidoo kale warbaahinta qaar ayaa werisay in saacadihii lasoo dhaafay ay dagaalamayaasha Al-Shabaab banaanka uga bexeen magaalada, waxaana xusid mudan in Al-Shabaab Jannaale maamulayeen in ka badan 10-sano.
Diyaaradaha dagaalka Mareykanka ayaa todobaadyadii lasoo dhaafay dhowr duqeymood ka fuliyey gudaha iyo daafaha deegaanka maanta la weeraray ee Jannaale.